Isku aadka Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka Gobalka Banaadir oo la soo saaray – Radio Muqdisho
Tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir oo la soo saaray dhowaan ayaa waxaa loo qeybiyay afar Group oo sadex group ay ku dagaalami doonan afar kooxod halka group-ka A ay ku dagaalami doonan shan kooxod.
Tartanka ayaa waxaa ku hardami doono 17-ka Degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir waxaana uu ahaa tartanka mid si joogta oo loo qabanayay Sideedii sano ee la soo dhaafay waxaana uu ahaa mid xiisahiisa kor u sii kacayay.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo Gudoomiye C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo sidoo ah duqa Muqdisho ayaa sanadkaan waxay doonayay in tartanka uu noqdo mid ka xiiso badan kuwii la soo dhaafay ayadoo degmooyinka ka qayb qaadanayo ku dhawaad laba bilood ka hor ay bilaaben isku diyaarintiisa.
Xaflad ka dhacday Pizza House ayaa lagu sameeyay isku aadka tartanka degmooyinka waxaana shaaca laga qaaday sidoo kale in daaha laga qaadi doono tartanka 24-bishaan August waxaana dhamaan kulamada ay ka dhici doonan garoonka Banaadir ee degmada C/Casiis.
Guruubada ayaa ah kuwa xiiso badan waxaana Group-ka dhimashada ama kooxaha ugu adag uu yahay Group-ka A oo ay ku dagaalami doonan shan kooxod oo aad u adag inkastoo Group-ka B sidoo kale uu yahay mid aanan la yareysan Karin.
Tartanaka waxaa difaacanaya degmada waaberi halka hodan kaalinta labaad ay kaga dhameysatay tartanka oo markii ugu horeysay kama danbeystiisa la ciyaaray xili habeen waxaana ahayd markii ugu horeysay oo mudo 30-sano kadib xili habeen ah ciyaar kubada cagta ah lagu ciyaaro gudaha dalkeena.
Waaberi Dharkenleey Yaaqshiid Shengaani Kaxda
Hodan Shibis Xamarjajab Warta nabadda
Kaaraan Boondheere Deyniile Howlwadaag
Heliwaa Wadajir Cabdicasiis Xamarweyne